Vol. 13 APRIL, 1911. Tsia
MISY aloka ny zava-miafina sy mahazatra. Mahatsiaro anay zazakely ny aloka amin'ny zavatra niainantsika voalohany teto amin'ity tontolo ity; Miara-dalana amintsika ny aloky ny fiainan-tsika; ary misy ny aloka rehefa miala amin'ity izao tontolo izao ity isika. Ny traikefantsika amin'ny aloka dia manomboka tsy ho ela taorian'ny nahatongavantsika tany amin'ny rivotra iainan'izao tontolo izao ary nahita ny tany. Na dia vitantsika aza ny maharesy lahatra ny tenantsika fa fantatsika hoe inona avy ireo aloka, dia vitsy amintsika no nandinika akaiky azy ireo.
Tahaka ny zazakely nodiavinay tao anaty sombin-tsinay ary nijery sy nanontany tena tao anaty aloky ny amboadia na ny rindrin'olona niditra tao amin'ilay efitrano. Ireo aloka ireo dia hafahafa sy mistery, mandra-pahitantsika ny olana amin'ny sain-tsainay, amin'ny fahitana fa ny fihetsika aloka dia miankina amin'ny hetsika ataon'ny olona izay manana drafitra sy aloka, na amin'ny hetsika misy ny hazavana izay nahitana azy. Na izany aza, dia nitaky fijerena sy fandinihana izy io mba hahitana fa ny aloka dia lehibe indrindra raha akaiky indrindra ny hazavana ary farafaharatsiny avy eny amin'ny rindrina, ary io dia kely indrindra sy farafaharatsiny indrindra rehefa faran'izay lavitra sy ny akaiky indrindra amin'ny rindrina. Taty aoriana, amin'ny maha-ankizy anay, dia nalain'ny bitro, gisadia, osy, ary aloky ny sasany izay namoronan'ny sasany tamim-pahombiazana ny tanany. Rehefa nihalehibe izahay, dia tsy nilalao intsony ny aloka toy izany. Mbola hafahafa ihany ny aloka, ary ny mistery manodidina azy ireo dia hitoetra mandra-pahafantantsika ny karazam-borona isan-karazany; inona ireo aloka, ary inona no tadiavin'izy ireo.
Ny leson'ny aloky ny fahazazana dia mampianatra antsika roa amin'ireo lalàna misy aloka. Ny hetsika sy ny fiovaovan'ny aloka eo amin'ny saha dia miovaova amin'ny hazavana izay ahitan'izy ireo azy ary miaraka amin'ny zavatra ireo drafitra sy aloky ny azy ireo. Ny haingo dia lehibe na kely, toy ireo izay manipy azy ireo dia lavitra na akaikin'ny saha izay ahafantarana ny aloka.
Mety hadinontsika ankehitriny ireo zava-misy ireo rehefa manadino ny maro amin'ireo lesona manan-danja amin'ny fahazazana isika; Fa raha hianatra izy ireo, ny lanjany sy ny fahamarinan'izy ireo dia hitarika antsika any aoriana any, rehefa ho fantatsika fa niova ny alok'izy ireo.
Misy, mety hiteny isika amin'izao fotoana izao, misy antony efatra ilaina amin'ny famoahana aloka: Voalohany, ny zavatra na zavatra izay misy; Faharoa, ny hazavana, izay mampiseho azy; fahatelo, aloka; ary, fahefatra, ny saha na ny efijery izay ahitana ny aloka. Toa mora foana izany. Rehefa lazaina amintsika fa aloky fotsiny ny drafitra eo amin'ny tontolon'ny zavatra tsy mitongilana izay manaloka ny taratry ny hazavana mianjady amin'io lafiny io, dia toa tsotra sy mora takarina ny fanazavana fa tsy mila fanampiana fanampiny. Fa ny fanazavana toy izany, marina na dia mety aza, aza mameno ny fahatsapana na ny fahatakarana. Ny aloka dia manana toetra ara-batana. Ny aloka dia mihoatra noho ny drafitra iray monja amin'ny zavatra iray izay misakana ny hazavana. Izany dia mamokatra fiantraikany sasantsasany amin'ny fahatsapana ary misy fiantraikany amin'ny saina tsy misy saina izany.
Ny vatana rehetra izay antsoina hoe opaque dia hampirona aloka rehefa mitsangana eo anoloan'ilay loharano izay misy ny hazavana; Fa ny toetry ny aloka sy ny vokatra izay mamokatra dia samy hafa noho ny hazavana izay manomana ny aloka. Ny aloky ny tara-pahazavan'ny masoandro sy ny fiantraikany dia tsy mitovy amin'ny aloka vokatry ny hazavan'ny volana. Ny hazavan'ny kintana dia miteraka vokatra hafa. Ny aloka natsipin'ny jiro, gazy, jiro elektrika na avy amin'ny loharano hafa rehetra dia samy hafa amin'ny natiorany, na dia ny fahasamihafana hita maso fotsiny aza dia ny fahasamihafana lehibe kokoa na kely kokoa ao amin'ny drafitr'ilay zavatra eo amin'ny faritra izay Novonoina ny aloka.
Tsy misy zavatra azo tsapain-tanana raha ny heviny dia tsy misy dikany ny fifandraisany amin'ny hazavana. Ny vatana ara-batana tsirairay dia manilika na manapaka ny sasany amin'ireo taratry ny hazavana ary mandalo na mangarahara amin'ny tara hafa.
Ny aloka dia tsy hoe ny tsy fisian'ny hazavana ao amin'ny drafitr'ilay zavatra izay manelanelana azy. Ny aloka dia zavatra iray ihany. Ny aloka dia zavatra mihoatra noho ny silhouette. Ny aloka dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny hazavana. Ny aloka dia ny fanatontosana zavatra iray mifanaraka amin'ny hazavana izay itiavana azy. Ny aloka dia ny fanatontosana ny kopia, ny mifanerasera, ny roa na ny matoatin'ilay zavatra mitranga. Misy antony fahadimy ilaina ho an'ny aloka. Ny fahadimy dia ny alokaloka.
Rehefa mijery aloka iray isika dia mahita ny drafitr'ilay tetikasa voatondro, eo amin'ny tontonana izay manaloka ny alokaloka. Saingy tsy mahita alokaloka isika. Ny aloky marina sy ny aloka marina dia tsy manondro fotsiny. Ny aloka dia fanehoana ny aloky ny ao anatiny sy ny drafitra ny vatana. Ny atin'ny vatany dia tsy afaka hijery satria ny maso dia tsy mahay mandanjalanja amin'ny taratry ny hazavana izay mivoaka miaraka amin'ny atin'ny vatany ary manomana ny alokaloka. Ny alokaloka na aloka izay azo tsapain-tanana amin'ny maso dia ny drafitra fotsiny amin'ny hazavana, izay ahafahan'ny maso manavaka. Fa raha efa nampiofanina ny masony, dia ho hitan'ny mpahita ny ao anatiny amin'ny vava-izy rehetra, fa ny làlan-kalehany tsy tonga volana, ary ny maizina dia mahafinaritra amin'ny volana fahafito. mandalo izany. Ny endriny ara-batana izay hita maso ny aloka, izany hoe, izay mahatonga ny drafitra hita maso amin'ny endriky ny vatany, dia nanintona azy io ho dika mitovy amin'ny alokaloka, ary misy fiantraikany eo amin'ny aloky ny aloka raha toa ka mitazona ny fahatsapana lava aorian'ny fanesorana ny vatana na ny hazavana izay mamoaka azy.
Raha toa ny tontolon'ny plate iray dia raisina an-tsaina amin'ny taratry ny hazavana izay mamakivaky ny vatana antsoina hoe opaque ary manipy aloka, dia mitazona ny fahatsapana na ny aloka io faritra io, ary mety ho an'ny olona iray izay manana traikefa fa tsy ny drafitra ihany amin'ny tarehimarika, fa mba hamaritana sy handinihana ny atin'ny afovoan'io aloka io. Azo atao ny mamantatra ny toe-javatra iainan'ny vatana miaina amin'ny vanim-potoanan'ny haavon'ny aloka ary haminavina ny toetry ny aretina na ny fahasalamana amin'ny ho avy araka ny diany. Kanefa tsy misy takelaka na tontonana mihazona ny tsiron'ny aloka araka izay hitan'ny maso tsotra. Ny antsoina hoe aloka, araka ny fomba fijerin'olombelona, ​​dia miteraka vokatra sasany, saingy tsy hita izany.